Ny fanadihadiana MGM dia niafara tamin'ny tanan'i Amazonà 8.500 miliara dolara | Avy amin'ny mac aho
Andro vitsy lasa izay dia namoaka lahatsoratra iray izahay izay nanondro fa i Amazon dia nifampiraharaha tamin'ny MGM, studio izay nanararaotan'i Apple nividy teo aloha ary mifampiraharaha amin'ny orinasa any Cupertino izy ireo mba hahazoany ny zon'ny sarimihetsika farany . an'ny 007 ary premiere amin'ny serivisy horonantsary streaming.
Ary farany, voamarina ireo tsaho ireo ary nanambara i Amazon fa nividy ny Metro Goldwin Mayer $ 8.450 4.000 miliara. Ny katalaogy izay misy an'ity vokatra ity dia maherin'ny 17.000 ny sarimihetsika ary XNUMX ora ny andiany. Fa ny zava-dehibe dia ny franchise, franchise izay manomboka izao Amazon dia ho afaka hitrandraka araka izay itiavany azy.
Ho fanampin'ny franchise 007, tamin'ny fividianana ny MGM, Amazon dia nahazo ny zon'ny Rocky, Poltergeist, The Hobbit, Robocop, the Pink Panther. Tsy mila matsilo be ianao vao hahafantatra fa ny katalaogy iray manontolo misy ao amin'ny MGM dia hiafara amin'ny Amazon Prime Video, izay hamela ny seho an-tsehatr'i Jeff Bezos hanitatra ny katalaogy misy mandrakizay, tsy misy fifanarahana momba ny zony manokana fa Netflix dia tonga tao anatin'ny taona vitsivitsy niaraka tamin'i Disney + ohatra ho an'ny andiany Marvel.
Apple dia mbola tsy manitatra ny katalaoginy
Andro vitsy lasa izay dia fantatsika fa roa taona lasa izay, Apple koa dia nifampiraharaha tamin'ny vondrona WarnerMedia, fifampiraharahana izay, araka ny fantatsika rehetra, dia tsy nahomby. Amin'ny farany, Apple dia tsy manana safidy intsony mba hahazoana fandalinana lehibe mamela azy hanitatra ny katalaogna misy eo amin'ny lampihany, katalaogy izay ho an'ny mpampiasa maro dia manan-danja tahaka ny atiny avoakan'ny sehatra matetika, na inona na inona mety be ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny fanadihadiana MGM dia niafara tany an-tanan'i Amazon tamin'ny vidiny 8.500 miliara dolara
Fanatsarana 1Password amin'ny tranonkala. Touch ID sy fanohanana maody maizina ankoatry ny hafa
AliveCor dia mametraka fitoriana antitrust amin'ny orinasa noho ny Apple Watch